Ilmaan Oromoo Diinaan Afaanfaajjoftan, Waan Hubachuu Qabdan ! | OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
January 6, 2017 OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG	Leave a comment
Akkuma yeroo garagaraatti irra deddeebiin waliif akeekamaa turee fi jirutti diinni biyya keenya weeraree jiru, tooftaa fi tarsiimoo haala yeroo qabsoon keenya keessa jiru irratti shira diiggaa tolchuun ummata Oromoo gidduutti qaawwaa hin jirre uumuuf karaa hundaan itti hojjeta.
ABO laaffisuu fi kophxeessuuf, ummata keenya afaan wal jala dabarsuun Dhaaba isaa irraa adda kutuuf roga cufaan milkaa`uuf of ijjibaatu.
Akeekaa fi kaayyoo Oromiyaa dhabamsiisanii, Impaayera maqaa Absiiniyaan ykn Xoophiyaan jaaramte saba keenya if keessatti dhoraa waartu jiraachisuu jedhu wal dhaalchisuu abjootu. Suuta suutaan Qe`ee Oromoo diiganii, biyya Oromoo fi saba Oromoo dhabamsiisuuf hogguyyuu miixatu.
Kana hojiitti jijjiiruuf tooftaa fi tarsiimoo haala sabnii fi qabsoon keenya keessa jiru waliin of geeddaraa bulu. Abjuun isaanii gita kamiinuu sabni Oromoo nam-tokkee irraa kaasee hanga jaarmayaatti akka jabaatee waa`ee isaaf hin hojjenne irratti dalagaa bahan jirus. QBOn akka tarkaanfatee galii isaa hin geenye waan danda`an cufaan agguraa itti tolchaa bulu.
Humni diinni adda dureen itti dhimma bahuun qopheeffatu caalmaatti;
Gantoota sabaa garaaf gugguufan bituun, saba irraa dhalatanitti diinomsuun gola sabichaa seenuun gocha seenaan dhiifama hin goonetti bobbaasuu.
– Namootni bifa kanaan diinaan ijaaramanii gidiraa saba keenya irraan gahaa turaanii fi jiran, kanneen safuu fi duudhaa ummatichaa cabsan, saragee aadaa sabichaa ala jiraatan qabachuun horii guddaa gadi itti naquun gocha qaanfachiisaa ummata ofii irratti akkka dalagan tolchu.
Namoota dhiigaan gar-lamee ta`anii quuqama sabummaa ofii hin qabne,yaadaan hirkatoo fi ejjennaan itti hanqatu bituun gocha garaa laafummaa hin qabne,shira ulfaatoo dalagsiisu.
Kanneen dhiigaan Oromoo hin taane, barmoota addaa barsiisuun;duudhaalee, oodaa fi afaan ummatichaa barsiisuun, namoota Oromoof quuqama qabaatan fakkeessuun ummata keenya bittimsuutti bobbaasuun.
Egaa bifa kanaan namoota gulantaa kana keessatti argaman QBO dhabamsiisuu fi ummata keenya gidduutti garaagartee hin jirru dhalchuun bara bittaa diina dheersessuuf hojjetu.
Holola Dhaaba keenya irratti diinaan bixxilamee ergamtoota kanaan deemaa jiru, kanneen beekaa hojjetanii fi osoo hin beekiin qaama gartuu kanaa ta`uun of dhabamsiisuuf hojjetan hedduu waan mul`ataniif wal hubachiisuun dirqama qabsoon eegduuti.
Barruulee saba keenya lagan hiruu fi jaarmayaan qoodu, qabsoo Oromoo maxxanfachuun qabsaa`otatti duulamu, WBO fi Qeerroo Bilisummaa abaaruun jireenya isaanii waakkatan barraa`anii yeroo garagaraatti namoota hagoo ta`aniin miidiyaa hawaasummaa irratti bittinfamuutu mul`ataa har`a gahe.
Gariin keenya hir`ina hubannoo irraa, nutti fakkaatee hamaamota diinaa waliin if irratti hololaa banne. Quuqamtoota qabsoo Oromoo kan qabaatan fakkaachuun, harkifachuu galii bilisummaa Oromoo irraa yaadni kun kennama nutti fakkaatee, yaadaa fi akeeka abaaramaa diinni nuuf qabu tumsuun mooraa qabsoo keenyaa dhoru wal irraa qolachuun garagalcha isaa facaasuun mul`ate. Dhadhacha diinni golgatee nu diigu wallaaluu irraa tumsa diinaa taanee of abaruun qabsoo keenyaatti gufuu ta`uun gidiraa garbummaa jalatti of tiksuutti fuulleffanne.
Yaada kiyya qaachessuuf ilmaan Oromoo quuqama saba keessanii qabdan, Dhaaba keessaniif deeggarsaa fi mararsiifannoo qabdan hundi hojiin mul`isuuf, ergamtoota diinni abbaltii farrummaan bobbaase nu diigutti fuula deeffatan caaltanii dhabamsiisuuf, sadarkaa duratti fuula Fb keessan irraa namoota kana ofirraa haquun balleessuu. Gocha diinaa masheensuun dhabamsiisuu irratti jabinaan hojjechuu fi hoji manee keenya jabeessinee dachaan dallaguun akeekaa fi kaayyoo keenya fardeessinee hojechuudha.
Horaa bulaa Dabaree Seenaa irraa
Previous PostDefense Witness Testimonials on Yonatan Tesfaye’s Terrorism ChargesNext PostIlmaan Oromoo Diinaan Afaanfaajjoftan, Waan Hubachuu Qabdan !